DIRAA Afrika waxaa ka go'an in uu hubiyo in adiga kuu gaarka ah la ilaaliyo. Ma waxaan kaa codsan doona inaad bixiso macluumaad gaar ah oo aad la ogaan karaa marka la isticmaalayo internetka, ka dibna waxaa laguu xaqiijin karaa in kaliya loo isticmaali doonaa si waafaqsan war-saxaaafeed.
DIRAA Africa waxaa laga yaabaa in nidaamkan laga bilaabo waqtiga la beddelo si muddo by xariirta this page. Waa in aad hubisaa this page waqti ka waqti si loo hubiyo in aad ku faraxsan tahay wax kasta oo isbedel yihiin. Siyaasaddaasi waa wax ku ool ka soo April 2014.
WAA MAXAY aan ururinno
Laga yaabaa in aanu u ururiyaan macluumaadka soo socda:
Macluumaad ay ka mid yihiin cinwaanka email xiriir.
Macluumaadka xafiiska kahortagga sida postcode.
Macluumaad kale oo ku habboon in ay adeegga macaamiisha, xigashooyin iwm.
Waxa aannu ku samayn warbixinaha aan soo ururiyo
Waxaan u baahan tahay warbixin this si ay u fahmaan baahidaada iyo ku siiyaan adeeg caafimaad oo wanaagsan, iyo gaar ahaan sababahan soo socda awgood:
Haynta rikoodhada Gudaha
Waxa laga yaabaa inaanu macluumaadka isticmaasho si loo hagaajiyo alaabooyinka iyo adeegeena.
Xilliyo gaar laga yaabaa in aanu soo dirno xayaysiinta emails ah oo ku saabsan alaabta cusub ama dalabyada u gaar ah.
Waxaa naga go'an in la hubiyo in macluumaadkaaga waa ammaan. Si looga hortago haysani ama siidaynta, waxaan meesha ka saaray jidh ahaaneed ku habboon, nidaamka elektarooniga ah iyo maamulka ilaalinta iyo ammaanka macluumaadka aan u ururin online.
Sida aynu u isticmaali Cookies
Kaydka macluumaadka macaamiisha waa fayl yar saarayaa drive computer adag, siso caawisaa baarid gaadiidka web ama u ogolaadaan codsiyada web in ay ka jawaabaan adiga shakhsi ahaan ah. Codsiga internetka waxay si baahidaada iyo Kiniya hawlaheeda, iyo ciyaarta by ururinta iyo xusuusashada macluumaadka ku saabsan dalbashadiina.
Waxaan u isticmaali cookies log gaadiidka si ay u ogaadaan bogagga ayaa waxaa loo isticmaali. Tani waxay nagu caawinaysaa baarid xog ku saabsan gaadiidka webpage iyo hagaajin lahayn website si ay u it beegtid baahiyaha macaamiisha. Waxa keliya oo aan macluumaadkan u isticmaal ujeedo tirakoobka falanqayn ka dibna xogta laga saaro nidaamka.
Guud ahaan, cookies naga caawiyaan kuu siiyaan website ka fiican by awood noogu si ay ula socdaan boggaga aad ka heli waxtar leh, kuwaas oo aadan sameyn. Kaydka gudaheedana sinaba uma ay ina siinaysaa ay helaan aad computer ama macluumaad kasta oo aad saabsan, aan ka ahayn xogta aad doorato in aad na.
Waxaad dooran kartaa in aad aqbasho ama u diiddo cookies. Kadib Inta badan si toos ah u aqbalaan cookies, laakiin waxaad caadi ahaan ka beddeli kartaa goob Ilkaha lagaa Siibane! inuu hoos u cookies haddii aad doorbideyso. Tani waxay kaa horjoogsan kara faa'iidaysanaya ka buuxaan websaydyada.
Ma ee gacanta ku gaarsiinta cookies ka soo bixiyeyaasha adeegga sida Google Analytics oo YouTube. Comments kasta ama su'aalo laga yaabaa in aad leedahay waa la sara leh asaleeyaha ee cookies kuwa.
Your isticmaalka this site loo qaato sida ogolaanshaha in ay ugu hooseysaa dhanka of cookies on your nidaamka. Haddii aadan kula raacsaneyn, fadlan qaado talaabo soo socda (taageero farsamo fadlan la xiriir farsamo yaqaan taageero IT.)
Xir website this
Isticmaal qalab web biraawsarkaaga si "delete aad cache"
Waxaad markaa dooran kartaa in aad u diido cookies Internetka via Reserved
Haddii aad sii oo aan badalayn goobaha aad, u qaadan doontaa waxaan in aad ugu faraxsan yihiin in ay helaan dhammaan cookies ka soo boggayaga internetka yihiin.
Our website ka koobnaan karaan kugu xiraya boggag kale oo xiiso. Si kastaba ha ahaatee, mar aad u isticmaashay links kuwaas inuu ka tago our site, waa in aad la soco in aanu lahayn wax ka talinaya website in kale. Sidaa darteed, waxaan ka mas'uul ah ilaalinta iyo arimaha gaarka ah ee macluumaad kasta oo aad u siiyaan halka booqanaya goobaha sida iyo goobaha sida ma noqon karaan ma maamuli by bayaan privacy this. Waa in aad taxadir iyo eego warbixinta qoraalka ah asturnaanta khuseyso si ay website-ka ee su'aasha.
Xakameynta macluumaadkaaga shakhsiyeed
Haddii aad horey u heshiiyey noo isticmaalaya macluumaadkaaga shakhsiyeed ujeeddooyin tooska, waad beddeli kartaa oo aad maskaxdaada waqti kasta oo warqad u soo qoro ama na U diritaanka at info@sentafrica.org
Waxaan ma iibin doonaa, qaybiyo ama rahan macluumaadkaaga shakhsiyeed in ay dhinac saddexaad haddii aan sharcigu u baahan yahay in sidaas la sameeyo.
Waxaad ka codsan kartaa faahfaahinta macluumaad shakhsi ahaaneed oo aanu kaa hayno adiga oo hoos Data Protection Act 1998. Lacag yar waxaa laga yaabaa in la bixin. Haddii aad jeclaan lahayd nuqul ka mid ah macluumaadka adiga kugu saabsan fadlan email info@waantAFRica.amag
Haddii aad aaminsan tahay in macluumaad kasta oo aannu qabanayno aad on uusan sax ahayn ama aan dhamaystirnayn, fadlan warqad u qor ama email noogu sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah cinwaanka kor ku xusan. Waxaan si degdeg ah loo saxo doonaa macluumaad kasta oo lagu helo in ay qaldan tahay.
Dabeyl in 2017
DEEQ – noqday taageere
Maalgalinta our Future
Production Cuntada 2016
Waxaan isticmaalnaa cookies si loo hubiyo in aan ku siin waayo-aragnimo ugu fiican ee website-kayaga. By gujinaya OK idinku adkayn aad ogolaato inaad this, haddii kale guji akhri wax dheeraad ah si aad u eegto sharciyada macluumaadka gaarka ah.OKMore